Sunday January 19, 2020 - 21:58:14 in Wararka by Mustaf Xuseen
Abaaro 07:10 daqiiqo Caawa ayay afar jih magaalada kaga soo weerarareen gaadiid waxyaabaha qarxa lagusoo buuxiyay iyo dagaal toos ah oo socday ilaa 08:20 daqiiqo. Hase yeeshe Ururka 14aad Guutada 14-ka Oktoober oo kawarqabay dhagarta argagixisada
Abaaro 07:10 daqiiqo Caawa ayay afar jih magaalada kaga soo weerarareen gaadiid waxyaabaha qarxa lagusoo buuxiyay iyo dagaal toos ah oo socday ilaa 08:20 daqiiqo. Hase yeeshe Ururka 14aad Guutada 14-ka Oktoober oo kawarqabay dhagarta argagixisada ayaa kahortagay weerarkaasi ay kudoonayeen inay ku arbushaan nabadgalyada magaalada Marka kajirta.
Kooxda argagixisada Al-shabaab ayaa dagaalkasi looga dilay 8 maleeshiyaad ah iyadoo looga dhaawacay 11 kale sida uu Warbaahinta Ciidamadda Qalabka Sida uu u sheegay Taliyaha Ururka 4aad Guutada 14 Oktoober Dhamme Cusmaan Maxamed Muuse.
Taliyaha ayaa sheegay Ciidanka ay qasaare xoogan gaarsiiyeen maleshiyaadkii sooweeraray islamarkaasna ay kadifaaceen shacabka magaalada dhibaatadi ay ladamacsanaayeen.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa inta badan kahortaga dhagaro noocaan oo kale ah oo ay soomaleegeen maleeshiaadka Al-shabaab,